Frozen Keyboard က အရင် ယူနီကုဒ်ဗားရှင်း ထွက်ပြီးသားပါ။ အခုက Dev ပြောင်းသွားတာလားတော့ မသိဘူး။ အကုန် အသစ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်။ ထားလိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အခု အသစ်မှာတော့ ယူနီကုဒ်အတွက် support ပေးလာပါပြီ။ သူတို့ Facebook page မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်း ပြန်ကူးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
🔥🔥 Hot Update - 3.4 🔥🔥
အောက်တိုဘာ ၁ရက်နေ့ကစပြီး Mobile ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပြူတာအကုန်လုံးမှာ Unicode Font, Unicode လက်ကွက်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးအနေအထားဖြင့် ပြောင်းလဲဖို့ အစိုးရအနေဖြင့် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
🇲🇲 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူငယ်နည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ Frozen Keyboard အဖွဲ့ မှလဲ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ လူထုအကျိုးပြုဖို့ အတွက် Mobile Phone မြန်မာစာလက်ကွက်နေရာမှာ Unicode သုံးစွဲရလွယ်ကူအောင်၊ အလွယ်တကူကူးပြောင်းနိုင်အောင် အချိန်ယူပြီး ယခု version ကို ထုတ်လုပ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ 🇲🇲
🤔🤔 ဘာတွေ ထူးခြားလာပြီလဲ ??? 🤔🤔
1. Zawgyi Unicode Converter ပါလာပါပြီ။
👉 Feature ဖွင့်ရန် - Frozen Keyboard > Setting > Zawgyi to Unicode Converter ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။
👉 အသုံးပြုနည်း - မိမိ ဖတ်ချင်တဲ့ မည်သည့်စာပိုဒ်ကိုမဆို Copy ကူးလိုက်တာနဲ့ auto Zawgyi <> Unicode ပြောင်းပြီး ဖတ်လို့ မရတာတွေ အကုန်ဖတ်လို့ ရသွားပါမယ်။
2. Unicode ကို Zawgyi Function, Zawgyi လက်ကွက်အတိုင်း ရိုက်မယ်။
👉 Feature ဖွင့်ရန် - Frozen Keyboard > Setting > Unicode ကိုဖွင့်ပေးပါ။ (မှတ်ချက် ။ ။ Zawgyi Font ကိုဖြုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။)
👉 အသုံးပြုနည်း - ယခင်ရိုက်နေတဲ့ Zawgyi လက်ကွက် အတိုင်းရိုက်လို့ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
☺️ ဘယ်သူတွေအတွက် သင့်တော်မလဲ - Zawgyi လက်ကွက်ကနေ Unicode ပြောင်းချင်သူများအတွက် အလွယ်တကူ ပြောင်းသုံးနိုင်ပါမယ်။
3. Pure Typing (Unicode လက်ကွက် အတိုင်းရိုက်နိုင်ပါပြီ။)
👉 Feature ဖွင့်ရန် - Frozen Keyboard > Setting > Pure Typing ကိုဖွင့်ပေးပါ။ (မှတ်ချက် ။ ။ Zawgyi Font ကိုဖြုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ Unicode ကိုဖွင့်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။)
👉 အသုံးပြုနည်း - Unicode လက်ကွက်အတိုင်း ရိုက်နိုင်ပါသည်။ နှစ်လုံးဆင့်တွေမှာသုံးတဲ့ virama key ကိုလဲ ကီးဘုတ်အလယ်မှာ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ "ကြ" ကိုရိုက်လ ျှင်လဲ "က" ပြီးမှ "ြ " ရိုက်တဲ့ ပုံစံဖြစ်သွားပါမယ်။
👇👇👇 Download လုပ်ရန် 👇👇👇
Download Play Store - http://bit.ly/psfrozen
APK Download - http://www.mediafire.com/file/kcdmmqr46b2ynd9/Frozen_3.4.apk/file
👍 "ကျွန်တော်တို့တူတူ ပြောင်းလဲကြရအောင်" 👍
#frozenkeyboard #unicode #newupdate #newversion
#store #theme #zawgyi #converter